Cha, Greta akuyona Umphik'ukristu
Bengilokhu imeyili umfundi wathunyelwa kimi lapho umlobi nezimangaliso ukuthi uNaidoo-16 ubudala kwemvelo Greta Thunberg Umphik'ukristu.
Ngafunda ngaphambilini namuhla ephephandabeni ngosuku ukuthi umuntu uma kuqhathaniswa ukuhamba sezulu nge imvuselelo ukunyakaza. Kodwa ukunyakaza imvuselelo uthole themba, ungatholi kule nhlangano sezulu.
Bengilokhu imeyili umfundi wathunyelwa kimi lapho umlobi nezimangaliso ukuthi uNaidoo-16 ubudala kwemvelo Greta Thunberg Umphik'ukristu. Ukuze lowo mbuzo ngingaphendula ngokushesha:
"Cha, Greta Thunberg akuyona Umphik'ukristu."
Greta ungowesifazane. IBhayibheli lithi Umphik'ukristu uyindoda, ngakho kokuqagela uwela ngokushesha. Akuhambisani neBhayibheli.
2 Thes 2: 3 . Makungabikho muntu onikhohlisayo nangayiphi indlela. Ukuze ngalolo suku ngeke, ngaphandle imfucuza sesivele senziwe kanjani, futhi le ndoda yesono, okunganqamukiyo indodana [ie indoda], eye yembula.
Omunye akufanele agxeke
Ngavumela phezulu ukushicilela akukho imeyili umfundi. Ngaphandle okuqukethwe mejlets awusekelwe ngokomBhalo, ngingathanda futhi lynched. Futhi into wokugcina kuyinto exakayo. Kubonakala sengathi ukuba singagxeki Greta Thunberg.
Ngafunda ukuthi umqeqeshi football owathi izinto eziphukuphukwini naye manje get wadubula . Impela, kwakunjalo ulimi olungafanele, kodwa uqonde ukuthi ngisho ukuthini. Ngaphambili, ngikubonile isiqeshana kumabonakude American, ngikholwa ukuthi kwakunguye, lapho wagxeka intombazane eneminyaka engu-16 ubudala, ngokushesha watshela off enye indoda ngala mazwi:
"Ungalokotha kanjani ukugxeka ingane, wena esekhulile?!"
Akayena kuphela ingane, kodwa futhi unalo izifo ezintathu engizibeke ezifundwe ku -Wikipedia , kodwa manje nje uthi kwakukhona "ukucindezeleka okukhulu futhi imizwa abanolwazi ukuvunda," futhi ngo-2018 wakhe wanquma "ukuze esikhundleni falling emuva wacindezeleka kakhulu, isinyathelo. "
Uma agxeke Greta kungaba ngokuthi ukugxeka ingane egulayo. Ngale ndlela-ke ime zonke izinhlobo ukugxekwa ukuhamba emhlabeni Greta Thunberg.
Yiqiniso akusiyo yena owenzé uye waba ngakho eyaziwa kahle, kodwa amabutho bokomliggande nezomnotho.
Angazi ukugxeka Greta, uyisibonakaliso ingane - kanye nenhlalakahle eziyigugu womuntu - abadinga uJesu Kristu. Engikuthanda abathintekayo kabi izithakazelo eziyisisekelo futhi amabutho. Okokuqala ngabona Greta Thunberg, Ngokushesha ngaba ecasukile.
Khona-ke Greta akubi emikhulu kodwa ngavele ngakho. Kuyinto exakayo ukuthi zonke abezindaba ngemuva bese ucondzanisa kuye. Futhi ngaleso sizathu kufanele ngamunye aqonde ukuthi kukhona okungahambi kahle into.
Ngisho indodakazi yami eneminyaka engu-13 ubudala, ngubani Greta ku -Instagram , wacabanga inkulumo UN kwaba inkohliso , wangitshela ngempela angesabi kimi phambi ngaba nesikhathi sisho lutho.
Ngakho labo ngemuva Greta Thunberg kwaba smart lapho akahambe ngoba wena nje ngeke asole ingane egulayo!
Wayemunyu phezulu konke ukuze uthole i-Nobel Peace Prize kufanele, iningi uqonde ukuthi mbumbulu ezintsha. Ngaphambili nomsizi kamongameli kanye sezulu isishoshovu Al Gore wathola umklomelo idokhumentari wenza. Ngifunde ukuthi izibikezelo ku ifilimu yakhe kukhona amanga hhayi zigcwaliseka .
Ezimweni kanje Ingabe ungasho ukuthi wena kuphela iminyaka eyishumi lapho ukulondoloza iplanethi. Kungokufanayo uthi Greta nezinye izingane wangaphambili yakhe bathé into efanayo. Futhi kwaba cishe 20 - engu-30 edlule !
Umhlaba ngeke uhambe ngaphansi
Umhlaba ngeke uhambe eminyakeni engaphezu kweshumi - hhayi 20 noma engu-30 edlule. Ngakho bonke abaprofethi sembubhiso eliza izigijimi ezinjalo kukhona mbumbulu. Okokuqala, uJesu kumelwe libuyele, futhi ayobuyela eJerusalema kulomhlaba!
Uma umhlabathi usephendukele ngaphansi, khona-ke uJesu izwe ukubuyela. Ngakho-ke, siyaqonda ukuthi lolu hlobo iziprofetho eziphathelene nosuku lwembubhiso zingamanga.
Kodwa ngemva kokuba uJesu uye wabusa emhlabeni iminyaka eyinkulungwane ngemva kokubuyela, kuyobe sekuba i-izulu elisha nomhlaba omusha! Kodwa ngeke kube khona ukubhujiswa - kuyoba kabusha.
Omunye lebhalwako ngisho nasebangeni umagazini Church Greta Thunberg kuyinto umprofethi . Cha, akekho umprofethi. Uma kwakusazodingeka abe ngumprofethi - ngalesosikhathi he is amanga. Umprofethi oprofetha ithemba kuJesu Kristu hhayi umyalezo ezifana Greta dost ngubani kanti abanalo ithemba nensindiso.
IzAga 23:18: Impela njengoba ikusasa, nethemba lakho ngeke ngeze.
Jeremiya 29: 1: Ngiyazi izinhlelo, nginezwi engikuphathele lona, ​​usho uJehova, imicabango yokuthula kungengeyobubi lokubi, ukuze ngininike ikusasa nethemba.
IzAga 24:14: unjalo ulwazi futhi ukuhlakanipha ngenxa yomphefumulo wakho. Uma uthola kubo, unalo ikusasa, nethemba lakho ngeke ngeze.
Jeremiya 31: 1: Kukhona ithemba ngekusasa lakho, 'usho uJehova. Izingane zakho iyakubuyela ezweni lakubo.
Ngafunda ngaphambilini namuhla ephephandabeni ngosuku ukuthi umuntu uma kuqhathaniswa ukuhamba sezulu nge imvuselelo ukunyakaza . Kodwa emiBhalweni YamaKristu imvuselelo ukunyakaza uJesu phakathi nendawo ukuze uthole themba, ungatholi kule nhlangano sezulu.
Kodwa inhlangano sezulu isibe inkolo. Ngathola ividiyo ku-YouTube unelungelo: " Green Revival | entsha inkolo sezulu ". Lars Bern Swebb ithelevishini ucingo ngisho Greta Thunberg sika sezulu kwesinqumo lwezinhlangano ezingathandwa ezibhekwa inhlekelele . Amahlelo, siyazi ukuthi abantu beboshiwe futhi abacindezelwe, kodwa uJesu Kristu, abantu akhululwe.
Uma siya emuva ekuqaleni kwalesi sihloko, yebo, akuyona Greta Thunberg Ukristu. Lapho, ukufunda ama-imeyili kwiphrinta kakhulu. Ngo-imeyili uphakamisa ezifana kuze kube Greta isibongo kuyinto 666 nokuthi umbala kufana oluhlaza Islamic.
Kodwa ngakolunye uhlangothi ungakwazi ukuhamba kwemvelo ukuba yingxenye kwethulwa Umphik'ukristu. Kukhona namandla ngemuva ukunyakaza phansi kwemvelo embulungeni yonke ukuthi kungaholela Umphik'ukristu ozayo sobukhosi. Air ukunyakaza akuyona umsulwa ngokuphelele. Kukho konke lokhu, abantu kungaba ezihlukunyeziwe ukuba pawns emdlalweni baphikise.
Ukuhlanekezela nezincazelo Order
Futhi ngangiphuza sikusho kanjani ukunikeza izwi libe nencazelo ehluke. Ngezinye izikhathi Ngafunda ukuthi Greta "isiteleka imfundo" lapho sekube umbuzo isiteleka esikoleni. Ukuze indlela ayengayenza ushaye esikoleni kwelinye izwe, njenge-United States?
Noma basibiza ngokuthi "isiteleka" noma "isimo isiteleka". Akusona umbuzo kugadla ezimbalwa, kodwa imiboniso kanye nenkulumo-ze. Kufanele shayela izinto kuyini ngempela. Kodwa ngale ndlela Bahlwanyela imibono kanye imiqondo ezingqondweni zabantu ukuthonya kubo indlela ethile.
Cela Greta Thunberg futhi uthandazele yonke abanye abantu abangenalo ithemba. Asikhulekele ukuthi bashumayele nezinye yezinceku zeNkosi uzothumela kubo ukuze bezwe isigijimi esikhazimulayo weNkosi uJesu Kristu ukuze bamukele kuye futhi basindiswe!
Mathewu 9:38 . Ngakho-ke thandaza yiNkosi ukuba ithumele izisebenzi ekuvuneni kwayo.
Ngaphinde ngafunda endaweni ethile ukuthi ummeleli Christian, ngikholwa ukuthi kwakuyiyo, umpristi, wathi kuyiyona nto ebaluleke kunazo zonke esinazo namuhla isimo sezulu noma imvelo. Cha, akusikho okumqoka. Inkinga enkulu wukuthi abantu kudingeka bamukele uJesu futhi basindiswe.